Mitohy ny havoriana ho an’ny antoko eo amin’ny fitondrana, tsy misy fahanginana ara-politika izany ny azy na amin’izao ankatoky ny fiavian’ny Mpamonjy izao aza. Nanatanteraka zaikabem-paritra voalohany tao Fianarantsoa ny Hery Vaovaon’i Madagasikara (HVM) ny sabotsy 17 desambra 2016 teo, nanehoany ny heriny. Nireharehan’ny minisitry ny fambolena sy fiompiana sady filoha nasionalin’ny antoko Rivo Rakotovao mihitsy fa antoko matanjaka voalohany eto Madagasikara ny HVM na eo aza ny tsikera maro. « Hiasa isika fa tsy hiandry ny 2018 ; isika rahateo manana olom-boafidy be indrindra eran’i Madagasikara, ny fananantsika fandresena amin’ny fifidianana no tanjona », hoy izy nanohy. Nahatonga solontena tamin’ity zaikabe tao amin’ny kianja mitafo Ambatomena ity ny faritany enina, niaraka tamin’ireo telo isaky ny kaominina 91 mandrafitra ny faritra Matsiatra Ambony. Anisan’ny hetahetan’ny mpizaika tao amin’ny vaomiera politika ny hirotsahan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ny fifidianana 2018, ny hananan’ny HVM gazety sy radio ary televiziona azy manokana. Asa tanamaro nanadiovana ny lalam-pirenena faha-7 manodidina ny Paositra ambany mihazo an’Ankazondrano notarihan’ny Senatera sady filoha lefitry ny Antenimierandoholona Riana Andriamandavy VII sy ilay mpandraharaha tompon’ny hotely A&C Raizamamonjy Claudine no nisantaran’ny HVM ny hetsika ny zoma. Tazana tany an-toerana avokoa ireo minisitra HVM mafana fo tahaka ny minisitry ny fampianarana ambaratonga ambony, ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena … Maika ery manao propagandy nefa ny asan’izy ireo andavanandro tsy hita akory izay mandeha sy misongadina.